Alaska Airlines inoburitsa San Francisco Giants-themed Airbus A321
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Alaska Airlines inoburitsa San Francisco Giants-themed Airbus A321
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Entertainment • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Sports • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Alaska Airlines inozivisa kutanga kwebhodhi kune vashanyi vakapfeka nguvo dzeSan Francisco Giants kuburikidza nemitambo yepassoason.
Alaska Airlines ndiyo inoshanda yepamhepo nendege weSan Francisco Giants baseball timu.
Iyi ndiyo yechipiri Alaska Airlines ndege ine livery yakatsaurirwa kuSan Francisco Giants.
Ndege ine muswe nhamba N855VA ichabhururuka muAlaska Airlines 'network ikozvino kusvika 2022.
Alaska Airlines, inoshanda yepamhepo nendege yeSan Francisco Giants, iri kutora mhemberero dzepasseason kuenda kumatunhu matsva nekutangisa kweiyo nyowani yeGiants-themed livery. Ingori nguva yekuti maGiants 'anouya playoff run, iyo Airbus 321 ndege yakaunzwa nhasi kune vateveri vanobva kuSan Francisco (SFO) kuSeattle (SEA).
Alaska Airlines inofumura hutsva hweSan Francisco Giants nemhemberero kuSan Francisco International Airport ine Giant mascot "Lou Seal"
“Zvinhu zvishoma zvinonakidza sekuona hofori iyi hombe, ine mavara-mavara ichibhururuka nepakati penzvimbo yedu yakanaka apo patinoenda kumakwikwi edu epamberi. Tarisiro yangu ndeyekuti ndege iyi inopa vateveri veGiants nzira yekunzwa vari muchikwata, pese pavanofamba, ”akadaro San Francisco Giants CEO uye Mutungamiri Larry Baer. “Kudyidzana sesu tinako Ndege yeAlaskainopa rutsigiro rwakakosha munharaunda yemunharaunda, vechidiki uye zvirongwa zvedzidzo seWillie Mays Scholarship Fund uye neGiants Community Fund, izvo zviri kubatsirawo kuchinja hupenyu hwevechidiki vedu. ”
Ichi ndicho chidimbu chechipiri chakatsaurirwa iyo San Francisco Giants. Ndege, muswe nhamba N855VA, ichafamba mukati mese network yeAlaska ikozvino kusvika 2022. Iyo nyowani yeGiants-themed livery ndiyo imwe yenzira dzakawanda vashanyi vanogona kupemberera kutamba kwechikwata. Alaska Airlines achangobva kuzivisa kuti vateveri vanopfeka nguo dzeGiants vanogona kukwira kare kune vese San Francisco vanoenda nendege kwenguva yekutamba kwechikwata postseason.
Vashandi veAlaska vakatsaurira ndege pamwe chete ne $ 100,000 cheki kuWillie Mays Scholarship Fund, mukuremekedza iyo 'Say Hey Kid's 90th bhavhdhe. Mari iyi inobatsira mukugadzira zvinangwa zvekoreji kuti zviitike kune vechidiki veSan Francisco veVatema uye inovapa simba rekuti vatevedze zvinangwa zvavo kuti vabudirire muchikoro chesekondari, kukoreji nekupfuura. Terminal 2 mapepa akabatwawo kune kushamisika kupemberera kwakazara neDJ varaidzo pane-saiti, mibairo, kupaaways uye kushanya kubva kuGiants 'mascot "Lou Seal" achipinda mumafaro.
"Alaska yanga iri shamwari inodadisa yeGiants kubvira 2017," akadaro Natalie Bowman, Alaska Airlines maneja maneja wezvemaki nekushambadzira kutaurirana. "Tinofara kuratidza kudada kwedu kweGiants kubva pamamita makumi matatu nemazana matatu nendege iyi yakasarudzika, uye tinoshuvira timu rombo rakanaka kwazvo sezvo ivo netarisiro yekumhanya zvakanyanya mumutambo we postseason."
Iyo Giants-yakafuridzirwa yakaputirwa nendege uye kutanga boarding ari pakati penzira dzakawanda Alaska iri kuwedzera hupo hwayo muBay, yayo yechitatu pakukura hub.